यसकारण हार्दैन कांग्रेस | Rastra News
मुलुक निर्वाचनको अन्तिम संघारमा छ । यो निर्वाचनसँगै संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । स्थानीय तहमा तीन चरणमा भएका निर्वाचनमध्ये दुई चरण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्भव भयो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पूरा हँुदैछ । निर्वाचन हुन नदिनेदेखि निर्वाचनलाई बिथोल्नेसम्मका सबै हर्कतको सामना गर्दै कांग्रेसले लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित समर्पण प्रस्तुत गरेको छ । संविधान स्वीकार नगरेर आन्दोलनको बाटो रोजिरहेका मधेसी दल मात्र होइन, संघीय संरचनालाई अस्वीकार गरेर निर्वाचन नगराई आलटाल गरेर शासन गरिरहेको एमालेसम्मलाई संविधानको भावना र मर्मअनुरूप संविधानको दायराभित्र ल्याउन कांग्रेस सफल भएको छ ।
संविधानसभा नेपाली कांग्रेसको माग थियो, कांग्रेसले यो माग उठाउँदा नेपालमा कम्युनिस्टहरू जन्मँदै थिए । राजा त्रिभुवनका बाबुछोराले गरेको बेइमानीका कारण लोकतन्त्र गुम्ने खतरा रह्यो । राणाशाहीको अन्त्य भएलगत्तैदेखि मुलुक राजशाहीको चंगुलमा फस्यो । यो चंगुलबाट निस्कन कांग्रेस संविधानसभाको माग थाती राखेर आमनिर्वाचनमा गयो । कांग्रेस कमजोर भयो भनेर राजा महेन्द्रले गराएको चुनावमा आमनागरिकले कांग्रेसलाई दुई तिहाइ बहुमत दिलाए । त्यही कांग्रेसले राजा महेन्द्रको निरंकुश शासनको अन्त्य ग¥यो । त्यही कांग्रेसले महेन्द्रका दुबै छोराका हैकम समाप्त ग¥यो र अन्ततः आफूले परिकल्पना गरेको संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने चाहना नेपाली कांग्रेसले नै पूरा ग¥यो । वाामपन्थीहरूको बहुमत रहेको पहिलो संविधानसभाले जारी गर्न नसकेको संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भयो । संयोगवश यसको कार्यान्वयन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको छ ।
राजनीतिक लडाइँमा कांग्रेस कहिल्यै हारेन । सत्तरी वर्षको राजनीतिक इतिहासमा कांग्रेस कहिले कमजोर जस्तो देखियो होला । कहिले सत्तासीन भयो होला र कहिले प्रतिपक्षमा बस्यो होला । तर कांग्रेसले लोकतन्त्रको यात्रामा अविचलित रूपमा आफूलाई उभ्याइरह्यो । धेरै कांग्रेस पञ्चायत पसे । कुनै बेला कांग्रेसको महामन्त्री पद नै अफाप जस्तो देखियो । डा.तुल्सी गिरीदेखि परशुनारायण चौधरीसम्म पञ्चायत पसे । राणाले सिध्याउन नसकेको कांग्रेस राजाले पनि सिध्याउन सकेनन् । राणा पनि समाप्त भए, राजा पनि समाप्त भए । तर कांग्रेस समाप्त भएन । आज कांग्रेसलाई सिध्याउन नेपालका कथित कम्युनिस्टहरू लागेका छन् । कांग्रेसको अन्तिम सरकारको घोषणा गरेर हिँडेका छन् । कांग्रेस मरेको ठानेर कांग्रेस कार्यकर्तालाई समवेदना दिंदै हिँडेका छन् । कम्युनिस्टहरूले जपतप गरेर समाप्तिको कामना गरेको कांग्रेस सबै दललाई मिलाएर मुलुक हाँकिरहेको छ । मुलुकमा अरुले पूरा गर्न नसकेका अभिभारा पूरा गरिरहेको छ ।
यो मुलुकमा कम्युनिस्टको शासन नेपाली नागरिकले नभोगेका होइनन् । २०४७ सालपछि कांग्रेसका चारजना प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्टका ६ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । मनमोहन अधिकारीले २८६ दिन शासन गरे । लोकेन्द्रबहादुर चन्दका नाममा वामदेव गौतमको सरकार २०९ दिन चल्यो । प्रचण्डले पहिलोपटक २०९ दिन र दोस्रोपटक ३०० दिन शासन गरे । माधवकुमार नेपालको ६२२ दिन, झलनाथ खनालको २०४ दिन, बाबुराम भट्टराईको ५६३ दिन र केपी ओलीका २९७ दिन नेपाली नागरिकले भोगेका कम्युनिस्ट शासन हुन् । आमनागरिकले उनीहरूको २७ सय ६१ दिनको शासनमा के पाए ? आज पनि मनमोहन अधिकारीका पालामा घोषणा गरिएको वृद्धभत्ता बेचेर एमाले मत मागिरहेको छ, मानौं यो रकम उसले आफ्नो पार्टी कोषबाट दिइरहेको छ । अझ २०६३ पछिका २२ सय ६६ दिन कम्युनिस्टहरूकै शासन रह्यो । यो भनेको ६ वर्षभन्दा लामो समय हो । संविधानसभा चुनावअघिको संक्रमणकालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो । उनले शान्ति प्रक्रियालाई एउटा चरणमा पु¥याएर संविधानसभाको चुनाव गराए । त्यसपछिका चार वर्ष निरन्तर कम्युनिस्टहरूले शासन गरे । संविधान घोषणा गराउने अभियानमा सुशील कोइरालाको सरकारको समय बित्यो र अहिले शेरबहादुर देउवा ६ महिनादेखि संविधान कार्यान्वयन गराउने क्रममा निर्वाचनमा केन्द्रित छन् ।
नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसादको पहिलो सरकारको तीन वर्षेभन्दा बाहेक निर्धक्क काम गर्न पाएन । २०५२ सालमा देउवाको सरकार बनेलगत्तैदेखि माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि सुरु ग¥यो । कांग्रेस कार्यकर्तालाई मार्ने र गाउँमा टिक्न नदिने काम ग¥यो । धेरै कांग्रेस कार्यकर्ताले ज्यान जोखिममा राखेर विकासका काममा जुटे । तर भएका संरचना ध्वस्त गर्ने र नयाँ कुनै योजना कार्यान्वयन हुन नदिने काम कसले ग¥यो ? ध्वंशपछि विकास हुन्छ भन्नेहरूले सरकारमा आएर कुन त्यस्तो संरचना तयार गरे ? र पनि, मुलुकमा जेजति भएको छ, त्यो कांग्रेसका कारण भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले चलेको मुलुकमा दसवटा विश्वविद्यालय बने । दुई चार ठूला सरकारी अस्पताल भएको मुलुकमा सवा सय ठूला अस्पताल बने । इन्जिनियर र डाक्टर बन्न कोटा कुर्नुपर्ने अवस्था रहेन । विद्यालय र सडक सञ्जालको व्यापक विस्तार भयो । विकासका अरु थुप्रै पूर्वाधार तयार छन् । सरकार स्थायी हुँदैन, आवधिक हुन्छ । नीति पनि स्थायी हँुदैन, गतिशील हुन्छ । सरकारले काम गर्न नपाए पनि कांग्रेसको सिद्धान्तले विकास गरेको छ । त्यसैले कांग्रेस समाप्त हुने र एकछत्र शासन गर्ने सपना देख्नेहरू आफैं समाप्त हुनेछन्, जसै राणा र राजाहरू आफैं समाप्त भए ।
राष्ट्र न्यूज सम्वाददाता माघ १८, २०७४
करिब ३० वर्षका एक मानिस कार्यालय जाने तयारी गर्दैथिए। उनले भान्छाकोठामा प्याज राख्ने ठाउँबाट खसेको ‘एक्लो’ प्याज देखे । त्यो…
मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस संयोजक कोइरालालाई प्रेस युनियन कास्कीको बधाई
के होला काँग्रेस महाधिवेशन ?
मन्दिरको सुन चोरी गर्ने र खरिद गर्ने पक्राउ
शिव मन्दिरमा भक्तजन
नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ बैंकका बैंकिङ सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनी
वडा सदस्य भट्टराईलाई मातृशोक